I-MediaTrans, eyona ndlela inomdla kwaye iyasebenza kwi-iTunes | IPhone iindaba
UPablo Aparicio | | Iapps zokusebenza, Ezahlukeneyo
Ukuba ininzi isoftware yomntu wesithathu yokulawula umxholo we-iPhone yethu kuthetha ukuba kukho into engayenziyo i-Apple elungileyo. Njengoko usazi kakuhle, isindululo seCupertino yi-iTunes, isixhobo esithandwa ngabanye bethu kodwa abanye abafuni nokusivula. Ukuba ukweli qela lesibini, enye yeendlela ezilungileyo onokukhetha kuzo yile IMediaTrans, inkqubo enobuchule ngakumbi kune-iTunes ekungafuneki ukuba sibe nayo nayiphi na ingxaki yokulawula umxholo we-iPhone yethu okanye i-iPad.
Ngokungafaniyo nezinye iinkqubo, iMediaTrans sele ikho ihlaziywa ngenkxaso ye-iOS 10 kunye ne-iPhone 7 Ifikelele kuluntu ngoSeptemba 13 kunye ne-16 ngokwahlukeneyo. Oku kuthetha ukuba ukuba sine-iPhone 5 okanye kamva, i-iPad mini 2 okanye kamva okanye isizukulwana sesithandathu se-iPod Touch, sinokulawula umxholo wayo wemultimedia kule enye iTunes gqibezela.
Nalu uluhlu lwe ezona mpawu ziphambili zeMediaTrans
1 Ukuhanjiswa kwemifanekiso
2 Lawula umculo kunye neevidiyo
3 Lawula i-e-Books
4 Lawula iimemo zelizwi kunye neetoni
4.1 Sebenzisa i-iPhone okanye i-iPad njengedrayivu ye-USB
5 Ndingayifumana njani iMediaTrans?
Mhlawumbi umsebenzi wokuqala asinika wona iMediaTrans ayisiyiyo eyona inzima ukuyilawula kwi-iOS, kodwa mhlawumbi kuphela. Nangona sinokuhlala sithumela iifoto ngeposi, xa sifaka inkqubo yokusebenza evela ku-0, njengoko usenokuba ukwenzile ngokusungulwa kwe-iOS 10, buyisa iifoto ebesinazo Ngaphambi kofakelo inokuba ngumsebenzi odinisayo. IMediaTrans inokusisebenzela ngokugqibeleleyo kwezi meko.
Lawula umculo kunye neevidiyo
Ngaphandle kwamathandabuzo, eyona nto imbi kakhulu abasebenzisi beTunes bayiyo dlulisela umculo kunye neevidiyo kwi-iPhone okanye i-iPad. Oku kubi ngakumbi okoko kwafika iApple Music, ukusukela ngoku kufuneka sisebenzise ilayibrari ye-iCloud, khetha umculo esifuna ukuwudlulisa, uwudlulise, wenze ilayibrari ye-iCloud kwakhona kwaye ulumke ungalicimi ithala leencwadi lasekhaya. Olunye ukhetho, ewe, kukukhuphela umculo kwiApple Music, kodwa ngenxa yoku kuyakufuneka sibhalise kwaye sihlawule i-9,99 / ngenyanga.
Nangona ndihlala kakuhle neTunes, kufuneka ndivume ukuba andonwabanga nge-100% ngenkqubo ecetywayo yiApple yokuhambisa olu hlobo lomxholo kwi-iPhone. Ndicinga ukuba isindululo seMediaTrans sibhetele kakhulu: kuyakwanela oko masirhuqe umxholo womsindo kwiwindow emva koko ucofe u "Vumelanisa" ukuhambisa umculo kwisixhobo sethu se-iOS. Oku kuyasebenza nakwiividiyo.
Ngaba uhlala ufunda kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad? Into enye endiyichazileyo ukuhambisa umculo okanye iividiyo kunokuthiwa malunga nendlela dlulisela iincwadi kwi-iPhone nge iTunes, kodwa kule meko kwi «Umphathi weNcwadi» kwiwindow. Ndikwadibana nenkqubo ye-Apple yalo msebenzi, kodwa ndiyaqonda ukuba kulula kakhulu ukugqithisa ii-eBooks ngokutsala, ukulahla kunye nokuvumelanisa.
Lawula iimemo zelizwi kunye neetoni
Into efana ncam nala manqaku mabini angaphambili inokwenziwa ngee ringtone. Kuba yongeza iringithoni ngeMediaTrans kuya kufuneka senze oku kulandelayo, ukuba ihlala ngaphezulu kwemizuzwana engama-40:
Sirhuqa nayiphi na ifayile yeaudio kwi «Ilizwi kunye neMpazamo weMpazamo weringithoni» window.
Cofa ku «Umenzi weringithoni» oza kuba ecaleni kwesikere.
Sikhetha isiqwenga esifuna njengethoni, kwimizuzwana engama-40 ubuninzi.
Sebenzisa i-iPhone okanye i-iPad njengedrayivu ye-USB
Okokugqibela, iMediaTrans ikwasinika into uninzi lwethu olungathanda ukuyenza ngaphandle kokusebenzisa nasiphi na isixhobo: I-iPhone, iPod Touch okanye i-iPad njengedrayivu ye-USB. Oku kuthetha ukuba nakho ukugcina naluphi na uhlobo lwefayile ukuze uhambe nayo kwaye ukwazi ukuyivula nakweyiphi na enye ikhompyuter, ukuba nje, ewe, enye ikhompyuter ikwanayo neMediaTrans
Njengayo yonke into kwesi sicelo silula, ukongeza iifayile ukuzithatha naphina kwi-iPhone yethu yenye yezona zilula, kule meko kakhulu kangangokuba Tsala nje iifayile kwi «Flash Drive» window. Ukukhuphela kwenye ikhompyuter, cofa nje i-iPhone yakho kwikhompyuter entsha, ukhethe ifayile kwaye ucofe ku "Export" esecaleni eliphezulu lewindow.
Ndingayifumana njani iMediaTrans?
Isixhobo esilula nesisebenzayo asinakho ukukhululeka. Okanye ukuba? Ewe kuxhomekeke: abo basebenzisa ithuba lokunyusa okwangoku, unokufumana iphepha-mvume kwaye ube neMediaTrans yasimahla ngonaphakade, kodwa ukunyuselwa kwexesha elinomda akusivumeli ukuba sifake uhlaziyo lwexesha elizayo okanye silusebenzise ngaphezulu kwekhompyuter enye. Ukuba sihlawula Xabiso rhoqo € 29.95 Siza kuthenga inkqubo kwiikhompyuter ezimbini kunye nokuhlaziywa kokuhlaziywa. Yintoni oyilindeleyo ukulawula umxholo we-iPhone yakho ngaphandle kokufudumeza intloko?
Layisha: IMacX MediaTrans (iiMacOS) | WinXMediaTrans (Windows)
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » IMediaTrans, enye indlela ebalaseleyo kwi-iTunes enobuchule kwaye iyasebenza
UDiego t sitsho
Phendula u-Diego t
mamaerto amakhonkco amabini enzelwe iMac ichanekile!
U-Apple uqala ukususa usetyenziso kwiVenkile ye App